Ra’iisul Wasaare Rooble oo u ambabaxay Magaalada Kismaayo – Radio Daljir
Ra’iisul Wasaare Rooble oo u ambabaxay Magaalada Kismaayo
Luulyo 7, 2021 9:10 b 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble & Wafdi uu hggaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Kismaayo ee caasimadda KMG ah ee Dowlad-goboleedka Jubaland.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa inta uu joogo Jubaland waxa uu kulammo la yeelan doonaa madaxda, waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Jubaland oo uu kala hadli doono arrimaha hirgelinta doorashooyinka, dib u heshiisiinta, nabadgelyada iyo horumarinta, isagoo u kuurgali doona xaaladda guud ahaan Jubbaland.
Inta uu joogo Ra’iisul Wasaaruhu waxa uu dhagax dhigi doonaa mashaariic horumarineed oo dowladda Soomaaliya ka higelineyso Jubbaland.
Waa socdaalkii ugu horreeyay ee Ra’iisul Wasaare Rooble ku tago Jubaland. Tan iyo markii loo magacaabay xilka, waxaana sidoo kale socdaalkiisa uu ku saabsan yahay dhammeystirka dib heshiisiinta Gedo iyo si guud howlaha doorashooyinka oo uu hormuud ka yahay Ra’iisul Wasaaruhu.
Itoobiya oo bilowday wejiga 2aad ee buuxinta biyo xireenka Nile, taasoo ka careysiisay Masar.
Caawa & Daljir iyo Cabdinaasir Ibraahin, Daljir Gaalkacyo (dhegayso)